Ny antony nanomezan’Andriamanitra ny Fanahy Masina dia ny mba hahazoantsika mijery ny fiainantsika. Ny toriteny dia tahaka ny fitaratra mba hijerena ny fiainam-panahy, ka raha mahay mijery izany isika dia haintsika ny manitsy ny diantsika, haintsika ihany koa manavao ny fiainam-panahy. Tsy ho zavatra henoina fotsiny ny tenin’Andriamanitra.
Jaona 16:12-13 : “ Mbola manana zavatra maro holazaina aminareo Aho, nefa tsy zakanareo ankehitriny. Fa raha tonga ny Fanahin’ ny fahamarinana, dia Izy no hitari-dàlana anareo ho amin’ ny marina rehetra ; fa tsy hiteny ho Azy Izy, fa izay ho reny dia holazainy avokoa ; ary ny zavatra ho avy aza dia hambarany aminareo.”
Galatiana 5:22-23 :“ Fa ny vokatry ny Fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, fahari-po fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po ; tsy misy lalàna manohitra izany.”
Asa 1:8 : “Fa hahazo hery hianareo amin’ ny hilatsahan’ ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran’ i Jodia sy Samaria ary hatramin’ ny faran’ ny tany. ”
Be dia be ny fampianarana, indraindray toa marina, mampisalasala, ary tsy hita intsony izay hatao mba hahazoana mandroso.
Noho ireo zavatra mitranga amin’izao tontolo izao izay maro henontsika ireo dia manjary tsy manana tanja-panahy matotra tsara isika, tsy manana fahaleovan-tena ara-panahy, fa voailangilana. Tsy hita intsony izay ho raisina ka mila mitandrina tsara.
Ny tsy mampitombo ny kristianina dia maro loatra ny ray sy reny am-panahy hany ka tsy hita intsony izay fitomboany.
Araka ny teny ao amin’ny Efesiana 4:13 : “ holehilahy lehibe, mahatratra ny ohatry ny halehiben’ ny fahafenoan’ i Kristy ” .
Tsy any an-danitra akory vao tanteraka io fa :
$1- olona tanteraka ny olona lehibe ara-panahy, izay tsy voailangilana intsony amin’ny fampiarana samihafa, ary mahay manavaka tsara ny zavatra izy sy tsy izy ;
$1- manana anjaran-tenany eo amin’ny maha ratsambatan’i Kristy satria nandray ny fanomezam-pahasoavana sy ny anjara asa fanompoana. Ny fiainany ety ambonin’ny tany dia misy dikany ary mazava tsara hoe ho aiza izy, inona ny ataony ary manao ahoana izy.
Ny ho afarantsika dia be ny hisotra rano maloto.
Matoa ny Fanahy Masin’Andriamanitra nametraka ny teny hoe “ hitaridalana anareo ho @ marina rehetra ” Jaona 16:13 , dia misy zavatra tokony ho tandremana ao.
Mampahafantara ny marina rehetra ny Fanahy Masina, ka mahay manavaka ny tsara na tsia.
Ny Fanahy Masina dia ao anatin’ny olona.
Amin’izao vanin’andro iainantsika izao, alohan’ny fiavian’ny farany, raha manaraka tsara ny zava-mitranga eran-tany ianareo ,(horohorontany) dia miha-mafy sy miha-betsaka, ary araho tsara fa ny firenena izay manalavitra an’I Jesosy no tena hahatongavan’izany be dia be (ny olona izay lavitra an’I Jesosy dia itambesaram-pahoriana amin’izao fotoana izao, tahaka ny firenena na ny fianakaviana.
Fampitandremana maro no nomen’I Jesosy (any am-parany hisy fanahy mamitaka, mpaminany sandoka, Matio 24:11 : “Ary hisy mpaminany sandoka maro hitsangana ka hamitaka ny maro.”).
Ny zavatra kendren’ny devoly dia ny tsy hahatonga anao an’ny an-danitra, an’ny amin’ilay fiainana mandrakizay. Mialona antsika izy.
Mamitaka ny devoly amin’izao fotoana izao. Fitaka : fomba hatao toa marina nefa tsy izy, misy fandrika ao anatiny.
Ny zava-doza dia mampiasa tenin’Andriamanitra ny devoly.
Tsy misy afa-tsy ny Fanahy Masina no hahazoanao mamantatra hoe ity no tena izy na tsia. Izay zavatra ataon’Andriamanitra rehetra no ataon’ny devoly saingy misy fetrany ihany.
Jaona 16:13 : “ ary nyzavatra ho avy aza dia hambarany aminareo.”
Rehefa tena mivavaka aza mba manotany olona fa manotania an’I Jesosy. Io Fanahy Masina io dia tena miresaka.
Fiadiana nomen’Andriamanitra ny Fanahy Masina ho entina miatrika ity fiainana ity.
Ohatra : andry afo sy andry rahona ho an’ny zanak’isaraely. Ny Fanahy Masina no mampahafantatra hoe tena izy na tsy izy.
Mangidihidy ny sofin’ny olona hitady fampianarana sahaza ho an’ny filany.
Ampahirato ny masom-panahy. Matio 12:33 : “ fa ny voany noahafantarana ny hazo. ” fa ny devoly mandrovi-tsihy amin’izao fotoana izao.
Jeremia 15:19 : “Aryraha manavakany zava-tsoa hiala amin’ ny zava-poana hianao, dia ho solom-bavako; Hanatona anao indray ireny; Fa tsy hianao no hanatona azy ”
Rehefa maika hahazo valim-bavaka ny olona, amin’izay ny devoly no tonga. Eo amin’Andriamanitra tsy misy fotoana fa aza matahotra. Aza mety ampitahorin’ny devoly hoe rampitso fa Andriamanitra rehefa miteny hoe mangataha dia homena, dia homeny anao izany.
Aza maika fa amin’Andriamanitra tsy misy hoe tara io.
Aza miova, mahasia miteny hoe “tsia” amin’ny devoly.
Ampahirato ny masom-panahy, manana ny fomba rehetra Andriamanitra hamonjena anao fa aza matahotra. Ny fiasan’Andriamanitra dia sady mitaiza Izy no manome tahaka ny zanaka tiana.
Ny fahononam-po no hodiniana (maitrise de soi)
Ity nofo ity dia mila zavatra be dia be (te hijery zavatra mahafinaritra ny maso, te hihinana zavatra tsara ny vava…)
Ny Fanahy Masina dia afaka mifehy ny filàna ao anaty.
Matoa ny olona tsy mahafehy tena dia tsy mbola ao ny Fanahy Masina, na ilay dingana mbola tokony hatao.
Io fahononam-po io no zavatra tena angataho amin’i Tompo.
Ahoana ny ahafahanao mifehy ny tenanao (vava, maso, sitrapo…)
Izany no aretin’ny nofo. Asan’ny Fanahy Masina no mibaiko izany.
Mila “force spirituelle” vao afaka mandresy.
Be isika no osaosa. Izay no nahatonga an’I Paoly, raha nahita ny mpianatra osa sy reraka, toa mila fampaherezana foana, nilaza hoe « Efanoraisinareova ny Fanahy Masina, fony vao nino hianareo ? » Asa 19 :2.
Ny olona nandray ny Fanahy Masina dia itoeran’ny herin’Andriamanitra isan’andro « hitombo hery izy » satria Fanahy mahery no ao anatiny.
Rehefa nirotsaka ny Fanahy Masina tao amin’ny asan’ny apostoly dia tsy nanantahotra mihitsy ny hanambara ny amin’i Jesosy.
Tsy mety izany kristianina osaosa « hahazo hery ianareo Fanahy Masina »
Inona ny zavatra tokony hataotsika ?
$1- Mandinika aloha : 2 Korintiana 13:5 : “ Diniho ny tenanareo, na mitoetra amin’ ny finoana hianareo, na tsia ”
$1- Ataovy tena tsapa androany ilay fanomezana avy amin’I Tompo. Omen’Andriamanitra ny Fanahy Masina ho an’izay olona tena mibebaka marina ka miala amin’ny fahotany. Ny ao amin’I Tompo no maharitra mandrakizay.
Havaozy indray ny fanoloran-tena.
$1- Manaova safidy dia ny hanan-karena any an-danitra. Salamo 34:10 : “ Fa izay mitady an’ i Jehovah kosa dia tsy hoorin-java-tsoa akory.”
Esory ao an-tsaina ny hoe tsy mihaino ahy Andriamanitra. Mihaino anao Izy ary tena tia anao fa sady mitaiza Izy no manome. Matio 6:33 : “ Fakatsaho alohany fanjakany sy ny fahamarinany, dia hanampy ho anareo izany rehetra izany ”
Raha mbola tsy azonao ny Fanahy Masina dia miala amin’ny fahazaran-dratsinao, amin’ny fahotanao, amin’ny fanamarinan-tena, ka mitenena hoe : Tompo ô manomboka androany, vonona aho hanaiky anao Jesosy ho Tompoko sy mpamonjy ny fiainako, mitenena Ianao androany. Hoy Izy : “ ary hianareohandray ny fanomezana, dia ny Fanahy Masina ” Asa 2:38.
Ary ianao izay efa nanolo-tena kosa, manàna safidy hanohitra ny nofo, fa izany no lalana ahazahoana miroso amin’izany atao hoe fahafenoan’ny Fanahy Masina, mitenena hoe : manomboka androany aho dia hanohitra, hiady amin’ity nofoko ity ary mba ho feno ny Fanahy Masina mba hahatonga ahy handeha araka ny sitraponao.